Kieran Tierney oo soo gaaray Magaalada London si uu u dhammaystiro ku biiristiisa kooxda Arsenal – Gool FM
Kieran Tierney oo soo gaaray Magaalada London si uu u dhammaystiro ku biiristiisa kooxda Arsenal
(London) 08 Agoosto 2019. Ciyaaryahanka Kieran Tierney ayaa soo gaaray Magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska si uu u dhammaystiro heshiiska uu ugu biirayo kooxda kubadda cagta Arsenal.
Daafacan reer Scotland ee Kieran Tierney ayaa qarka u saaran inuu tijaabada caafimaad u maro, si rasmi ahna uga mid noqdo kooxda Gunners oo naadiga Celtic kaga soo qaadanaysa 25 milyan oo gini.
The Gunners ayaa si xoog leh loola xiriirinayey inay la soo wareegto xiddiga xulka qaranka Scotland isbuucyadii dhowaa, balse hadda waxa ay u muuqataa in heshiiska uu gabo-gabo ku dhow yahay.
Arsenal ayaa kooxda The Hoops lagu naanayso kala heshiisay lacagaha iibka Kieran Tierney, si ay uga helaan 22-sano jirkaan.
Tierney ayaa 170 kulan u saftay kooxda Bhoys lagu naanayso tan iyo markii uu u ciyaaray kulankiisii ugu horreeyey sanadkii 2015-kii, halka uu kula guuleystay siddeed koob intii lagu guda jiray waqtigiisa kooxda koowaad ee Celtic.
Kooxda Arsenal ayaa sidoo kale la sheegayaa inay ku dhowadahay heshiiska David Luiz, halka horay ay ula soo wareegtay Weeraryahankii naadiga Lille ee Nicolas Pepe oo ay ku soo qaateen heshiis ku kacaya 72 milyan oo gini.
Kooxaha Chelsea iyo Arsenal oo ka heshiiyay saxiixa David Luiz
Halyeey kooxda AC Milan ah oo ka hadlay suurtogalnimada uu Modric ku imaan karo San Siro